नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै, सहभागी होलान् ओली ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै, सहभागी होलान् ओली ?
२० मंसिर २०७७, शनिबार १०:३६ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठक शनिबारका लागि बोलाइएको छ । दिउखँसो १ बजेपछि बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुने–नहुनेबारे अन्योलता कायमै रहेको छ ।
गत मंगलबार ओली बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् भने सो बैठकले शनिबारको बैठकमा ओलीलाई सहभागी हुन अनुरोध गर्दै १८ गतेका लागि तय भएको स्थायी समिति बैठक समेत मंसिर २१ का लागि सार्ने निर्णय भएको थियो ।
आजको बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेका अलग–अलग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने तयारी छ । गएको कात्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले एकल प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
यस्तै मंसिर १३ को बैठकमा ओलीले जवाफ पेस गरेका थिए । त्यसपछि गत मंगलबार बसेको बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक तीन दिनसम्म स्थगित गरेका हुन् ।
ऐतिहाँसिक होटल सोल्टी र आईएचसी बीच सम्झौता, अब नयाँ ब्रान्डबाट संचालनमा आउने २० मंसिर २०७७, शनिबार १०:३६
थनुय लुँय भाउ २० मंसिर २०७७, शनिबार १०:३६
प्रधानमन्त्रीले आज ‘गोदावरी सनराइज’ सम्मेलन केन्द्र, उद्घाटन गर्दै २० मंसिर २०७७, शनिबार १०:३६
अमेजनले २५० मिलियन यूरोको मुद्धा जित्यो २० मंसिर २०७७, शनिबार १०:३६
७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा विस्तार २० मंसिर २०७७, शनिबार १०:३६